किन आउँछ यौन इच्छामा कमी ? - Open Khabar - नेपाली अनलाइन डिजिटल पत्रिका
किन आउँछ यौन इच्छामा कमी ?
कम यौन शक्तिको सबैभन्दा सामान्य कारण वृद्धावस्था हो। उमेरसंगै महिलाको योनीको आकार घट्छ र योनीको पर्खालहरू पातलो हुन्छन्। यस्तै पुरुषको इरेक्शन (लिंग उत्तेजना) हुन गाह्रो हुन्छ। यौन हार्मोनको स्तरमा पनि गिरावट आउन थाल्छ।
रक्त प्रवाह कम हुनु
रक्तनलीहरू अवरुद्ध हुनु वा यौन अंगहरूमा रगत प्रवाह कम हुनुले पनि यौन शक्ति वा क्षमता कम गर्न सक्छ। जब तपाईं यौन क्रियाकलापमा संलग्न हुन खोज्नुहुन्छ तब यसले तपाईंलाई उत्तेजनाको अनुभव गर्नबाट रोक्न सक्छ।
विभिन्न प्रकारका रोगहरु
यौन संचारित रोगहरु जस्तै मधुमेह, पिसाब नली संक्रमण, न्युराल्जिया, उच्च रक्तचाप र यौन विकार, स्खलन, इरेक्टाइल डिसफङ्शन, बढेको प्रोस्टेट ग्रन्थि आदि जस्ता केही रोगहरूले पनि तपाईंको यौन आनन्दमा बाधाको रूपमा काम गर्न सक्छ वा क्षमता घटाउन सक्छ। यसले तपाईंको यौन शक्तिलाई पनि असर गर्छ। मोटोपनले तपाईंको यौन आनन्दलाई पनि कम गर्न सक्छ।
असामान्य यौन क्रोमोजोम
भ्रूणको प्रजनन अंगमा कुनै असामान्यता वा प्रसवको समयमा कुनै खराबीले पनि यौन समस्या निम्त्याउन सक्छ। निषेचन प्रक्रिया (फर्टिलाइजेशन प्रोसेस) का क्रममा असामान्य सेक्स क्रोमोजोमहरू पनि यौन विकारको कारण हुन सक्छ।
तनावले तपाईंको यौन हर्मोनमा हस्तक्षेप गर्न सक्छ र सेक्समा रुची घटाउन सक्छ। तनावले दम्पती बीच दरार पैदा गर्छ जसले उनीहरुको यौन रुची घटाउन सक्छ।